ရိုးသားမှု နဲ့ အကြိုးအမွတျ
HomeKnowledgeရိုးသားမှု နဲ့ အကြိုးအမွတျ
တခါတုနျးက သူဌေးသူကွှယျတဦးဟာ ရစေီးသနျတဲ့ မွဈကို ကူးဖွတျရငျး လှမှေောကျ သှားလို့ မွဈလယျမှာ ရှိတဲ့ ကြောကျတုံး တတုံးပျေါ တကျပွီး အကူအညီရဖို့ အျောဟဈနခေဲ့တယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာ လူငယျလေး တယောကျ ရောကျလာခဲ့တယျ။
လူငယျလေးဟာ ကိုယျ့အသကျကိုမှ မမှုဘဲ သူကွှယျကို ကယျဖို့ လှကေို လှျောခတျခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ ရစေီးသနျတဲ့ အတှကျ လှကေ ထငျသလောကျ အမွနျ မလှျောနိုငျခဲ့ဘူး။
" ငါ့ကို မွနျမွနျကယျပါ ? ငါ့ကို ကယျနိုငျရငျ မငျးကို ငှေ ၁ ထောငျ ပေးမယျ " သူကွှယျက အျောဟဈပမေယျ့ ရစေီးသနျတဲ့ အတှကျ လှကေဖွေးဖွေးပဲ ရှလြေ့ား နိုငျခဲ့တယျ။
" မွနျမွနျလှျောပါ ၊ ဒီအရောကျ လှျောခဲ့ရငျ ငါ ငှေ ၂ ထောငျပေးမယျ " ။ လူငယျလေးက အားကွိုးမာနျတကျ လှျောခဲ့ပမေယျ့ လှိုငျးတှကွေားမှာ ထငျသလောကျ အရာ မရောကျခဲ့ဘူး။
" ရတှေေ တကျလာပွီ အားစိုကျစမျးပါ။ မငျးကို ငှေ ၅ ထောငျ ပေးမယျ " သူကွှယျက အျောဟဈတယျ။ ရကေ သူရပျထားတဲ့ ကြောကျတုံးကို တဖွညျးဖွညျး မွုပျလာခဲ့ပွီ ဖွဈတယျ။ လူငယျလေးဟာ သူကွှယျဆီ လှျောခတျနတေဲ့ လှလှေျောနှုနျးဟာလညျး တဖွညျးဖွညျး ပိုနှေးသှားတယျ။
" မွနျမွနျလှျော ငါ ၁ သောငျး ပေးမယျ " သူကွှယျရဲ့ ခွကေို ရေ စမွှုပျနပွေီ ဖွဈတယျ။
ဒါပမေယျ့ လှသှေားနှုနျးက ပိုနှေးလာခဲ့တယျ။ " ၅ သောငျး ပေးမယျ ၅ သောငျး ... " စကားတောငျ ဆုံးအောငျ မပွောနိုငျဘဲ လှိုငျးကွီး တလုံးကွောငျ့ သူကွှယျ မွဈထဲကြ နဈမွုပျပွီး ရနေောကျ လိုကျပါသှားခဲ့တယျ။ လူငယျလေးက လှကေို ကမျးကပျပွီး ဝမျးနညျးစှာနဲ့
" ခငျဗြားကို ကြှနျတျော ကယျမလို့ ပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ဘာကွောငျ့ ကြှနျတေျာ့ကို ငှတှေေ လာပေးခဲ့ရသလဲ၊ တကွိမျပွီး တကွိမျ ငှတှေေ တိုးပေးခဲ့လို့ ကြှနျတျော ဖွေးဖွေးလှျောရငျ ငှေ ပိုရနိုငျမယျလို့ တှေးထငျခဲ့တယျ ။ ဒါကွောငျ့ ရနေောကျ ခငျဗြား ပါသှားခဲ့တယျ။ ကြှနျတျောကွောငျ့ ခငျဗြား အသကျ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယျ "
" ဒါပမေယျ့ ၊ ခငျဗြားကို ကယျဖို့ ကြှနျတေျာ့စိတျထဲမှာ ရိုးသားမှု တှပေဲ ရှိပွီး အကြိုးအမွတျကို ထညျ့မစဉျးစားမိ ခြိနျမှာ ခငျဗြား ဘာဖွဈလို့ ကြှနျတျောကို ငှတှေေ ပေးမယျလို့ ပွောခဲ့ရသလဲ "
သူမြားရဲ့ စတေနာတှေ ၊ ရိုးသားမှုတှေ အပျေါ အရောငျမဆိုးမိ စဖေို့ လိုပါတယျ ။
ရိုးသားမှု နဲ့ အကျိုးအမြတ်
တခါတုန်းက သူဌေးသူကြွယ်တဦးဟာ ရေစီးသန်တဲ့ မြစ်ကို ကူးဖြတ်ရင်း လှေမှောက် သွားလို့ မြစ်လယ်မှာ ရှိတဲ့ ကျောက်တုံး တတုံးပေါ် တက်ပြီး အကူအညီရဖို့ အော်ဟစ်နေခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ လူငယ်လေး တယောက် ရောက်လာခဲ့တယ်။
လူငယ်လေးဟာ ကိုယ့်အသက်ကိုမှ မမှုဘဲ သူကြွယ်ကို ကယ်ဖို့ လှေကို လှော်ခတ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ရေစီးသန်တဲ့ အတွက် လှေက ထင်သလောက် အမြန် မလှော်နိုင်ခဲ့ဘူး။
" ငါ့ကို မြန်မြန်ကယ်ပါ ? ငါ့ကို ကယ်နိုင်ရင် မင်းကို ငွေ ၁ ထောင် ပေးမယ် " သူကြွယ်က အော်ဟစ်ပေမယ့် ရေစီးသန်တဲ့ အတွက် လှေကဖြေးဖြေးပဲ ရွေ့လျား နိုင်ခဲ့တယ်။
" မြန်မြန်လှော်ပါ ၊ ဒီအရောက် လှော်ခဲ့ရင် ငါ ငွေ ၂ ထောင်ပေးမယ် " ။ လူငယ်လေးက အားကြိုးမာန်တက် လှော်ခဲ့ပေမယ့် လှိုင်းတွေကြားမှာ ထင်သလောက် အရာ မရောက်ခဲ့ဘူး။
" ရေတွေ တက်လာပြီ အားစိုက်စမ်းပါ။ မင်းကို ငွေ ၅ ထောင် ပေးမယ် " သူကြွယ်က အော်ဟစ်တယ်။ ရေက သူရပ်ထားတဲ့ ကျောက်တုံးကို တဖြည်းဖြည်း မြုပ်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်တယ်။ လူငယ်လေးဟာ သူကြွယ်ဆီ လှော်ခတ်နေတဲ့ လှေလှော်နှုန်းဟာလည်း တဖြည်းဖြည်း ပိုနှေးသွားတယ်။
" မြန်မြန်လှော် ငါ ၁ သောင်း ပေးမယ် " သူကြွယ်ရဲ့ ခြေကို ရေ စမြှုပ်နေပြီ ဖြစ်တယ်။
ဒါပေမယ့် လှေသွားနှုန်းက ပိုနှေးလာခဲ့တယ်။ " ၅ သောင်း ပေးမယ် ၅ သောင်း ... " စကားတောင် ဆုံးအောင် မပြောနိုင်ဘဲ လှိုင်းကြီး တလုံးကြောင့် သူကြွယ် မြစ်ထဲကျ နစ်မြုပ်ပြီး ရေနောက် လိုက်ပါသွားခဲ့တယ်။ လူငယ်လေးက လှေကို ကမ်းကပ်ပြီး ဝမ်းနည်းစွာနဲ့
" ခင်ဗျားကို ကျွန်တော် ကယ်မလို့ ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့် ကျွန်တော့်ကို ငွေတွေ လာပေးခဲ့ရသလဲ၊ တကြိမ်ပြီး တကြိမ် ငွေတွေ တိုးပေးခဲ့လို့ ကျွန်တော် ဖြေးဖြေးလှော်ရင် ငွေ ပိုရနိုင်မယ်လို့ တွေးထင်ခဲ့တယ် ။ ဒါကြောင့် ရေနောက် ခင်ဗျား ပါသွားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ကြောင့် ခင်ဗျား အသက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ် "
" ဒါပေမယ့် ၊ ခင်ဗျားကို ကယ်ဖို့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ရိုးသားမှု တွေပဲ ရှိပြီး အကျိုးအမြတ်ကို ထည့်မစဉ်းစားမိ ချိန်မှာ ခင်ဗျား ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်တော်ကို ငွေတွေ ပေးမယ်လို့ ပြောခဲ့ရသလဲ "
သူများရဲ့ စေတနာတွေ ၊ ရိုးသားမှုတွေ အပေါ် အရောင်မဆိုးမိ စေဖို့ လိုပါတယ် ။